जाडो कोट डिजाइन: एक अवलोकन, मोडेल, वर्णन र समीक्षा
एक महिलाको सौन्दर्य लुकाउँछ एक सिजन - यो जाडो कि विश्वास छ। आखिर, साँचो आंकडा छैन Machined blesnosh छ, र रोमाञ्चक twists prodemonstriruesh छैन। तर हिउँदमा तपाईं स्पष्ट आफ्नो नाजुक स्वाद र अनुपात को अर्थमा देखाउन सक्छौं। उदाहरणका लागि, सुरुचिपूर्ण डिजाइनर कोट न्यानो र चिसो छ छनौट र सामाजिक घटनाहरू भीड छैन नष्ट हुनेछन्।
जब सडक र आफ्नो अनुहार रातो चिसो बाट गंभीर frosts, फैशन रुझान दरकिनार छन्। मुख्य कुरा - स्थिर छैन र आफ्नो स्वास्थ्य हानी छैन। फेसन डिजाइनर कोट सबै महिला को राहत धेरै - यो सौन्दर्य खातिर ठूलो बलिदान गर्मी छैन। बाहिरी कपडा र मात्र होइन सुन्दर, तर पनि एक आरामदायक, न्यानो र नरम हुनुपर्छ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले, नयाँ सिजन को अघिबाटै जान्ने काम मा, तपाईं, सबैभन्दा सुन्दर बहुमुखी र व्यावहारिक कोट चयन गर्न, फैशन रुझान अध्ययन गर्न अग्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। तर चिन्ने, सायद तपाईं आफैलाई व्यवहार गर्न र धेरै मोडेल किन्न चाहनु छौँ?! डिजाइनर फैशन उद्योग को यस्तो विकल्प र pampering "सिकार" विचार गर्नुपर्छ। डिजाइन कोट, अलिकति लुगा ठूलो बजार मूल्य भन्दा उच्च, तर अझै पनि यो अग्रिम खरिद भने तपाईँले गम्भीर थोक आदेश मा सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ, उचित सीमा भित्र रहन्छ पाठ्यक्रम, को।
व्यावहारिक महिलाहरु को लागि
महिला आधुनिक र कुशल मोबाइल पन्जा, टोपी र पनि जूता को चयन निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ, तर बाहिरी कपडा संसारको विभिन्न एक ठहराव गर्न राख्छ। गंभीर frosts को कोट मा एक आँखा राख्न, तर कार मा यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ एउटा छोटो कोट वा कुनै फर बनियान रुचाउँछु। तर के क्याफे र रोमान्टिक मिति मा अनुकूल hikes बारेमा? छोटो मा, वस्त्र धेरै हुनुपर्छ, तर यदि मात्र पनि एक प्रतिलिपि विश्वव्यापी हुनेछ। उदाहरणका लागि, एक डिजाइनर कोट। यो आंकडा, आँखा गर्न न्यानो र खुसी मा तल बस्न ठीक छ। विश्वव्यापी माथिल्लो लुगा लागि flashy extravagant रंग वा आधुनिक शैलीहरू, आफ्नो सिजन पास र हराएको मूल्य सबै दराज वस्तुहरू रूपमा चयन गर्न सकिँदैन। डिजाइनर जाडो कोट एक आदरणीय शास्त्रीय छवि सुनिश्चित गर्नेछ, यो कुनै पनि अवस्थामा उपयुक्त छ। त्यसैले तपाईं मिति मा जाने वा सहकर्मी खाजा साझेदारी गर्न। साथै, बाहिरी कपडा यस प्रकारको परिर्वतनशील capricious मौसम, बंद-सिजन यति विशेषता लागि सिद्ध छ। यसको लेन को जलवायु ध्यान, एक कोट चयन गर्न राम्रो। सकारात्मक फर ट्रिम संग संस्करण बारेमा रूसी बालिका। यस्तो सजावट र आफ्नो रोमान्स आकर्षित, त्यसैले पनि चिसो को अवधिमा एक महिला एक महिला राख्न हुनेछ। युवा बालिका लागि हुड र बटनहरू दुई पङ्क्ति संग सान्दर्भिक मोडेल चयन variability को राशि गर्न सक्षम हुन।
चयनको लागि नियम
तपाईं फर एक डिजाइनर कोट चयन भने, त्यसपछि रोपण आदर्श हुनुपर्छ भनेर सम्झना। यो नेत्रहीन सही आकार अनुमति दिन्छ। यो बाहिरी वस्त्र विषयको किनभने तर, यो कोट फिटिङ हुँदैन कस, र तपाईँले एक ज्याकेट वा cardigan अन्तर्गत यो लगाउन सक्नेछ। avtoledi सान्दर्भिक मुक्त छाँयामा कोट र छोटो अवधिका लागि। क्लासिकल शैली अनुयायी लागि राम्रो-अनुकूल छ फारम-फिटिङ कोट को गोडा गर्न। सधैं जोइन्टहरूमा को evenness सुनिश्चित गर्न मोडेल को अस्तर को underside जाँच गर्नुहोस्। डिजाइनर महिला जाडो कोट गंध वा एक ग्लू टाँसिएको मुद्दा हुनु हुँदैन। यो एक साँच्चै उच्च गुणस्तरीय कुरा को लागि पैसा दिन महत्त्वपूर्ण छ तपाईं विशेष गरी यदि, लुगाफाटा यस लेखमा ढिलाइ हुन सक्छ पाउन। रूसी डिजाइनर अब मुद्दा मूल्य धेरै तीव्र हुनेछ भनेर होइन, एकदम केहि बजेट रेखाहरू बाहिरी कपडा पेशकश गर्दै छन्।
भुक्तानी गर्न त्यस खातामा?
प्रवृत्ति छाला कोट डिजाइन रहनेछ। जाडो डिजाइनर घर को मूल लाइन सिर्जना प्रेरित एशिया Malbershtein। दायरा अविश्वसनीय व्यापक छ; तपाईं त लामो पन्जा संग लगाउन सहज जो छोटो आस्तीन, संग अछूता वा सीमित राख्नु छाला कोट संग लाइन को सुरुचिपूर्ण किमोनो चयन गर्न सक्नुहुन्छ। क्लासिकल विधा मा उज्ज्वल सामान decorates कि Kirill Gasin यसको संक्षिप्त र किफायती मोडेल काम गर्दछ। प्रभाव रोचक छ, तर मूल। को मास्को फेशन सप्ताह मौसम गैर-परम्परागत सामाग्री संग तातियाना कथा आफ्नो दृष्टि देखाए। मास्को गरिरहेको डिजाइनर बालिका डिजाइनर कोट लागि Shumov र लिसा एक्लै Artom। तिनीहरूले बनावट र कृत्रिम फर संग परीक्षण गर्न रुचि, तर वफादार भई क्लासिक ढाँचाको प्रेम।
साधारण बाहिर ...
हुनत यो प्रवृत्ति व्यापक छ मात्र रूसी डिजाइनर, आकार कोट "oversayz" काम गर्छ। तर डिजाइनर Daria Samkovich ठीक यस क्षेत्रमा काम हो। यो आफ्नो बेल्ट को "स्वाद" न भूलें, प्यास्टेल र उज्ज्वल रंग संग मोडेल-कोसा बनाउँछ। आनन्द बाहिरी कपडा, किमोनो-जस्तो, साथै एक रेट्रो मोडेल जस्तै - अलेक्जेन्डर र नादिए Shmargunenko Bloodless - प्रेमी क्रूर शैली सेन्ट पीटर्सबर्ग डिजाइनर जसको फर्वाडहरु काम गर्न ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। यो मास्टर फैशन कोट लागि - यो परीक्षण गर्न एक महान अवसर हो। यो एउटा सानो फारम embody बहुमुखी प्रतिभा, सुन्दरता र मोडेल को originality आवश्यक छ। फेयर सेक्स को विकल्प सीमित छैन, त्यसैले यो केवल शैली परिभाषित गर्न आवश्यक छ।
एक सामान्य नियम जस्तै, केही मौसम लागि कोट किन्न, त्यसैले यो सहज आरामदायक र राम्रो तरिका क्लासिक हुनुपर्छ। लाज ostromodnyh कुरा किन्न सहमत, र छ महिना पछि कि यो आफ्नो शैली फिट गर्दैन पाउन! मुख्य चयन मापदण्ड लागि आकार प्रकार लिन आवश्यक छ। को रूप मा curvaceous उपयुक्त कोट संग जवान महिलाहरु ट्रयापिज कोट बेल। नेत्रहीन, यो मोडेल यो एक कम्प्याक्ट आकार बनाउँछ। सान्दर्भिक गाढा खाकी गम्भीर दिन, व्यापार। क्लासिक कालो मोडेल को समीक्षा बालिका सक्रिय र बहुमुखी छोड्नुहोस्। तिनीहरूले के गर्न साना समय र धेरै छ, तर किनभने तिनीहरूले एक व्यावहारिक र सधैं सुशील विकल्प चयन गर्नुहोस्। तर काम को रोमान्टिक छवि, को कोट कोमल गुलाबी, बैंगनी वा नीला रंग हो भने। यस्तो बाहिरी कपडा संग क्रूर जूता खराब जोडती, त्यसैले यसलाई संकुचित जूता, जूता, सुन्दर डिजाइन, वा जूता प्राथमिकता दिन राम्रो छ। बालिका अग्लो र बेल्ट संग कलिलो फिट लामो मोडेल। Alas, रूस लामो मोडेल बाहिरी कपडा मात्र मान्छे extravagant र बोल्ड चयन गर्नुहोस्।
प्रकार र कोट को वर्गीकरण
यो महिला कोट को विविधता हराएको प्राप्त गर्न कठिन छ। के संकेत तिनीहरूलाई वर्गीकरण गर्न? का सम्भावित मालिकको आंकडा सुरु गरौँ। डिजाइन कोट - अरूलाई बीच ध्यान लागि संघर्ष महिला हतियार। फैशन उद्योग, कोट को शैलीहरू एक पाहुना को सम्पूर्ण इतिहास मा। आधुनिक fashionistas, धेरै धेरै लोकप्रिय छन्। पूर्ण बालिका ढीले लागि फिट मोडेल, नेत्रहीन को मात्रा ढाकछोप र यो Thumbelina वा साना आटा को प्रभाव सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ देखि सानो र कलिलो लागि खराब विकल्प हो। बहुमुखी विकल्प एक ब्रिटिश कोट-frock हुनेछ। यो semiadherent छाँयामा, मिडी-लम्बाइ, डबल-breasted बांधनेवाला र अंग्रेजी कलर संग एक क्लासिक मोडेल छ।
को कोट-dafflkot नि: शुल्क छाँयामा। यो मोडेल एक हुड, प्याच pockets र माउन्ट टिका संग ठूलो clasps छ। यो कोट समुद्र फारम संग analogy द्वारा सिर्जना गरिएको थियो र त्यसैले न्यानो लुगा सिर्जना ऊन थियो।
अन्तमा, यसको शुद्ध रूप मा एक क्लासिक - फैशन घर Burberry को डिजाइनर गर्न फैशन धन्यवाद आउनुभयो जो एक डबल-breasted कोट र खाडल कोट। यस प्रकारका कोट अत्यन्तै सुरुचिपूर्ण छाँयामा, मिडी लम्बाइ, कलर र कट मा पाउन सकिन्छ।
कहिलेकाहीं हामी बस, एउटा फरक शैली लुगा चयन गर्न नयाँ दिशा मा जाने र डराउँछन् ध्यान छैन अपरिचित को राय गर्न। यस्तो अवस्थामा, क्लासिक मात्र सबै भन्दा राम्रो विकल्प देखिन्छ, तर तपाईं बहुमत को राय विपरीत जाँदै, प्रवृत्ति रहन सक्छ। अप उत्पादन नै एक एकल संरचना बनाउन हतियार - विश्वस्त महिलाहरु को लागि डिजाइनर Raglan, जसको नाम विशेषता सुविधा सुझाव बनाउन। यो कोट एक औसत लम्बाइ र स्वागत संग कलर छ। यो कोट धेरै स्त्री र आकर्षक, तर एकै समयमा अविश्वसनीय सजिलो, त्यसैले दु: खी मेरो विकल्प गर्न छैन बारे छ। कोट बन्द-सिजन अवधि लागि उपयुक्त, को बाहुला एक पर्याप्त व्यापक छ र हावा पास गर्न सक्नुहुन्छ देखि। व्यापार महिला पनि उपयुक्त कोट-ओभरकोट, एक सरल शैलीमा couched। यो आक्रमण एक निश्चित शेयर असर र बाहिर संसारमा कल, सुविधाजनक र व्यावहारिक बाहिरी कपडा छ। को ओभरकोट मा महिला चासो छ र तुरुन्तै यसलाई स्पष्ट गर्ने कमजोरी यसलाई अनुमति गर्दैन बनाउँछ। जूता उपयुक्त क्रूर र प्रभावशाली।
neformalok लागि रचनात्मक प्रकारको डिजाइनर कोट-गाउन सी। बरु buckles को, यो मोडेल बेल्ट छ, तर गंभीर चिसो को हुनत केही डिजाइनर फर ट्रिम र इन्सुलेशन एक कोट सिर्जना, फेरि कुनै राम्रो छ किनभने।
चिसो मौसम को सबै भन्दा, यो महिला कार मा धारण भने, तपाईं शानदार कोट छोटो ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ।
एक यूनिसेक्स शैली मा क्लासिक कोट पोलो समावेश गर्न। यो आंकडा मा बस्न निःशुल्क हुनुपर्छ र बालुवा-बेज टन प्रदर्शन गर्न।
अन्तमा, न्यानो poncho र एक कोट र एक cloak डिजाइन sleeveless समावेश गर्न सक्नुहुन्छ छैन, तर यो माथिल्लो लुगा को एक लोकप्रिय मोडेल छ देखि, यो poncho ध्यान छल्न गर्न अनौठो हुनेछ। निस्सन्देह, कोट को धेरै किसिमहरु, तर हरेक डिजाइनर अलिकति नयाँ भागहरु थप्दा को स्थापना तरिका परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं एक डिजाइनर किन आदेश गर्नुपर्छ?
महिला ग्राहकहरु यो डिजाइनर व्यक्तिगत स्पर्श संग कुरा sews र ग्राहक को आंकडा को आवश्यकता र सुविधाहरू मा केंद्रित एक विशेष र मौलिक मोडेल प्रदान गर्दछ किनभने, बस एक सनक, तर एक तर्कसंगत दृष्टिकोण छैन भन्ने लाग्छ। तपाईं खराब रंग, हेम हेम साथ राख्न वा छाला सफा छैन। मास्टर देखि एक कोट को मूल्य को लागि एक बुटीक देखि एक राम्रो उत्पादन भन्दा अधिक महंगा छैन। त्यहाँ लगाउन सुविधा प्रदान मानक ढाँचाहरू छन्। तर राम्रो डिजाइनर tailoring मा सबै दृश्य स्तर पालन गर्न ग्राहक को व्यक्तिगत प्राथमिकताहरू केन्द्रित हुनेछ।
लुगा मा Zoomorphic Ornamental ब्यान्ड
सुरुचिपूर्ण: लुगा मा शैली को मूल कुराहरु
जूता नयाँ शेष: आकार चार्ट
स्टड संग फैशन महिला ज्याकेट
स्टाइलिस्ट सिफारिस: गैर-मानक तथ्याङ्कले संग महिलाहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो पहिरन
अडियो फाइल सम्पादक: कार्यक्रमको अवलोकन
औषधि "क्लोरीडोल": प्रयोगका लागि निर्देशनहरू, समीक्षाहरू
जीवन र स्वास्थ्य विरुद्ध अपराधको: अपराधी कोड को लेख 122
Kazakov - सोभियत संघ को मार्शल
को औंलाहरुमा मा नङ को Peeling: कारणहरू र उपचार को विशेषताहरु
अमेरिकी Staffordshire टेरियर: नस्ल वर्णन, प्रकृति फोटो
Akaki, नाम अर्थ - gentleness
के बिरुवाहरु मा अलैंगिक प्रजनन को जैविक महत्त्व छ?
"Exforge" लागूपदार्थको। प्रयोगको लागि निर्देशन
हवाई अड्डा "Enfidha": सेवा हावा बन्दरगाह। टुनिशिया को रिसोर्ट्स गर्न प्राप्त
मिसिसिपी: सामान्य विवरण र एक संक्षिप्त इतिहास